Hanan Elemo Qilxu Support Fund | Oromia Shall be Free
Hanan Elemo Qilxu Support Fund
bilisummaa September 1, 2016	2 Comments
Torban kana Qaanqee Show oduu gama tokkoon nama gammachiisee gama kaaniin nama gaddisiisuu dhageesisee jira. Innis Hanan Elemo Qilxu fi Abdulkarim Elemo Qilxuu biyya Yemen keessa rakkina irra jiraachuu isaaniiti. Gootni Oromo guddichi ilmaan qabaachuu dhagawuun nama gammachiisa. Gama kaaniin rakkina keessa jiraachuun isaanii nama gadisiisa. Gargaarsa barbaachisu godhuufii dhaaf koreen qindeesituu qindaawee jira. Koreen kun waa lama irratti hojjeta. Inni jalqabaa rakkina keessaa dandamachiisuudhaaf gargaarsa maallaqaa lammiiwwan Oromiyaa ala jiraatan irraa fuunanee biraan gawuudha. Kan lammataa ammoo biyya nagaa hin qabne sana keessaa bahanii bakka nagaan jirachuu danda’an qubachiisuuf yaalii barbaachisu godhuu dha. Kanaaf maaloo, hatataman, arjoominaan ha birmannu.
(Dr. Mohammed Hassen, Dr. Solomon Ungashe, Elemo Ali, Elias Ibsa fi Damsho Ali)
Previous Yaadanoo Ebbisa Addunya (30.8.2016)
Next Dutch, Israeli Farms in Ethiopia Attacked by Protesters